Ny akanjo amin'ny rongony dia tsy afaka manampy fa azafady! Mahagaga izy ireo, malefaka, mistery, firaisana ara-nofo ary kamboty amin'ny sehatry ny vehivavy, manery ny lehilahy hankasitraka sy hiverina.
Aiza no ahafahako manao akanjo amin'ny lela maitso?
Ny antony iray hividianana ity zavatra mahafinaritra ity dia mety ho betsaka tokoa:
Ny fampakaram-bady dia tranga iray izay tsy maintsy ampisehoan'ilay ampakarina ny toerany. Azo atao ny mifantoka amin'ny saina, ny tanana, ny décolletage zone ary tsy mitafy akanjo fotsy amin'ny lamosina amin'ny fomba fanehoana klasika na ny fomba amam-panao Empire.
Ny akanjo miloko manga eo amin'ny soroka dia hanampy anao amin'ny toe-javatra rehetra. Mankany amin'ny fety - ampitao amin'ny akanjo ambony, akanjo marevaka ary mandresy ny dihin'ny dihy sy ny lahy sy vavy hafa. Mandehana amin'ny daty - manipy bolero na kapa mainty ary ankafizo ny fitiavana sy ny fahalemen'ny sary.
Ny akanjo lava sy fohy amin'ny rongony dia "miditra" amin'ny fankalazana. Ny akanjo vita amin'ny satroka, satina, lamba hafa mendri-piderana sy mahavariana dia matetika no mitambatra amin'ny ambony toy izany.
Ny fitafiana amin'ny banga misy printy mazava sy clogs dia tsy azo ovaina amin'ny fialan-tsasatra any amin'ny firenena mafana.
Ahoana ny fisafidianana ny halavan'ny bateria?
Ny mpanaingo dia manandrana manandramana amin'ny antsipirihany amin'ny akanjon'ny vehivavy. Amin'izao fotoana izao, ny dikan-teny malalaka sy ety dia manan-danja, fa ny akanjon'ny akanjony dia tena malaza. Izy ireo dia zavatra tokony handinihana manokana ireo zazavavy izay miezaka ny ho eo amin'ny fironana.
Nefa tokony ho tsaroanao fa tokony hifidy ny akanjo amin'ny rongony, mifantoka amin'ny toetra mampiavaka azy. Ny tratra miloko marevaka dia voafintotra amin'ny lamosina matevina, feno - hanohana betsaka. Raha ny tena izy, indrisy, tsara kokoa ny mamela ny vehivavy manana tavy mavesatra be sy tanana feno, ary raha ny mifanohitra amin'izany, ny ankizivavy mahaleotena ihany koa. Ny tsy fahombiazany dia mijery modely toy izany ary ireo solontenan'ny zandary malalaka.
Fiambenana alina ho an'ny vehivavy
Black sweatshirt - amin'ny inona no tokony ho lamaody amin'ny lamaody?
Beige skirt - fifantenana ny sary nalaina indrindra
Vehivavy kiraro mahazatra
Sarafany lava ho an'ny vehivavy matavy
Dress with skeleton skirt
Bola lava volo 2014
VSD - inona izany amin'ny fiteny tsotra?
Anarana ho an'ny Husky
Mistletoe fotsy hoditra
Nahoana no nofinofy dolara?
Sorbents ho an'ireo ankizy manana alahelo
Cristiano Ronaldo nanamafy ny nahaterahan'ny kambana
Ahoana ny fomba hanaovana pastry vaovao?
Heart of a turkey - recipe
Hevitra ho an'ny pedikure amin'ny fahavaratra
Vavaka an'i Md Lioka
Inona no nofinofin'ny tank?
Inona no kilalao ilaina amin'ny zaza iray ao anatin'ny herintaona?
Atheroma - fitsaboana